Sacuudiga oo shaaca ka qaaday in weerarkii lagu qaaday goobaha shidaalka uu ka yimid… – Hagaag.com
Sacuudiga oo shaaca ka qaaday in weerarkii lagu qaaday goobaha shidaalka uu ka yimid…
Posted on 18 Seteembar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Boqortooyada Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in weerarkii lagu qaaday todobaadkii hore warshada ugu weyn shidaalka ee Aramco laga soo qaaday jihada waqooyi, waxaana ay sheegtay in aysan su’aal ka taagneyn in weerarkaan ay Iiraan taageero ka Geysatay.
Afhayeenka wasaarada Difaaca Sacuudiga oo shir Jaraa’id qabtay goordhow ayaa xusay in qolofka madaafiicdan ay muujineyso in ay Iiraan leedahay isaga oo intaa ku daray in gantaalaha ceynkani oo kale ah aysan heysan kooxda Xuutiyiinta Yemen.
Colonel Turki al-Malki ayaa sheegay in sidoo kale diyaaradaha Drone-ka iyo gantaalaha ay hayaan ay cadeyn muuqata u yihiin xadgudubka Iiraan.
Al-Maliki ayaa intaa ku daray in 18 diyaaradood oo nooca duuliyaha aan laheyn iyo todobo gantaal lagu weeraray xarunta shidaalka ee Aramco.
Afhayeenka wasaarada difaaca Sacuudiga ayaa su’aal ay weydiiyeen saxafiyiinta ka gaabsaday in uu si toos ah weerarkan ula xiriirayo maamulka Tehraan.
Ugu danbeyn wasaarada difaaca sacuudiga ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto baaritaankan, iyadoo warsaxaafadeedka ka soo baxay Al-Maliki lagu xaqiijiyay in weerarkaan dantii laga lahaa aan laga gaarin uuna fashil ku Dhamaaday.
Maalmo ka hor ayey aheyd markii xoghayaha arimaha dibada Mareykanka Mike Pompeo uu ku eedayay weerarka 14-tii bishan dhacay dowlada Iiraan.